ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကို သတ်၍ ဗိုက်ကို သန္ဓေသားထုတ်ယူမှုဖြစ်ပွား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကို သတ်၍ ဗိုက်ကို သန္ဓေသားထုတ်ယူမှုဖြစ်ပွား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရှီကာဂိုမြို့၌ သားအမိနှစ်ဦးသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို လည်ပင်းညစ်သတ်ကာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၏ ဗိုက်ကို သားလှီးဓားဖြင့်ခွဲ၍ သန္ဓေသားထုတ်ယူခဲ့ကြောင်း ဥပဒေအရာရှိများက မေ ၁၆ ရက်တွင်ပြောသည်။ ကလာရစ်ဆာ ဖီဂူရိုယာနှင့်သမီးဖြစ်သူ ဒဲဆရီတို့သည် အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မာလန် […]
လေယာဉ် ဆင်းသက်ချိန် အိမ်သာတက်ချင် စိတ်ကို မအောင့်အီးနိုင်ခဲ့လို့ ပြဿနာတက် အရှက်ကွဲခဲ့ရတဲ့ အလှမယ်လေး
လေယာဉ် ဆင်းသက်ချိန် အိမ်သာတက်ချင် စိတ်ကို မအောင့်အီးနိုင်ခဲ့လို့ ပြဿနာတက် အရှက်ကွဲခဲ့ရတဲ့ အလှမယ်လေး မလေးရှားမော်ဒယ်လ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသက် ၂၈ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Sabee Chin ဟာ Miss Charming International 2017 ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရရှိခဲ့သူ အလှမယ်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. သူမဟာ […]
လမ်းဘေးမှာ ကုန်စိမ်းရောင်းပြီး ဆင်းရဲသားတွေအတွက် ဆေးရုံကြီးတစ်ရုံဆောက်ပေးခဲ့သူ
လမ်းဘေးမှာ ကုန်စိမ်းရောင်းပြီး ဆင်းရဲသားတွေအတွက် ဆေးရုံကြီးတစ်ရုံဆောက်ပေးခဲ့သူ လမ်းဘေးမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းတဲ့ ကုန်စိမ်းသည် တစ်ယောက်က ဆေးရုံကြီးတစ်ရုံဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုရင် ယုံကြမလား မသိဘူး။ မယုံနိုင်စရာကောင်းပေမယ့် သူ့ရဲ့အိပ်မက်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး အိန္ဒိယမှာ ရှိနေပါတယ်။ သူမနာမည်က ဆပ်ဘ်ဟာစီနီမစ်စ်ထရီ(subhashini mistry) ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားမြို့ Hanspukur […]
အိန္ဒိယနိုင်ငံက အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးဟာ ဖောက်ပြန်တဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့် အမျိုးမျိုး စိတ်ညစ်ခဲ့ရပေမယ့်၊ သူမရဲက ယောက်ျားနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ မယားငယ်က ညှိနှိုင်းမှုတွေ ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ခင်ပွန်းကို ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် ရူပီး သိန်း(၅၀) ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုပါ။ အဲဒီကမ်းလှမ်းမှုကို မယားကြီးဖြစ်သူက ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ […]
ဝင်းနဲ့ဇော်အတွက်နောက်ဆုံးမျှော်လင့်လျက်အဖြစ် ထိုင်းဘုရင်ထံအသနားခံစာယနေ့တင်သွင်းမည် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သေဒဏ်ကျခံထားခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဝင်း နဲ့ ဇော် အဖြစ်ဟာ နှစ်တွေပင်ကြာခဲ့ပါပြီ။ သူတို့ဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွဲဆိုချက်နဲ့အခု လို တရားစီရင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် ပထမအကြိမ် အယူခံတင်ခဲ့ပေမယ့် […]
မွေးကင်းစ ၄ ရက်သားလေးကို အရှင်လတ်လတ် သတ်ခဲ့ပေမယ့် ထူးဆန်းစွာ ရှင်သန်နေတဲ့ အဖြစ်
မွေးကင်းစ ၄ ရက်သားလေးကို အရှင်လတ်လတ် သတ်ခဲ့ပေမယ့် ထူးဆန်းစွာ ရှင်သန်နေတဲ့ အဖြစ် ( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) အိန္ဒိယနိုင်ငံက အမျိုးသား တစ်ဦးဟာ သူသိပ်ချစ်ရတဲ့ သမီးလေး သေဆုံးသွားတာကြောင့် ချက်ချင်းမြေမြှပ်သဂြိုလ်ဖို့အတွက် မြေကျင်းတူးတဲ့အခါမှာ.. ၄ ရက်သားအရွယ် မွေးကင်စ […]
ဗီရာနဲ့ ပွဲမှာ ဆုကြေးငွေအများအပြား အပိုရရှိခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
ဗီရာနဲ့ ပွဲမှာ ဆုကြေးငွေအများအပြား အပိုရရှိခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၃ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ One Chimpionship ရဲ့ နှစ် ၁၀၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲက တစ်ကမ္ဘာလုံး စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်းချန်ပီယံ လုပွဲဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့စပါးအုံး အောင်လအန်ဆန်နဲ့ စိန်ခေါ်သူ ဗီရာတို့ရဲ့ ပွဲမှာ မြန်မာ့ […]
စမ်းသပ်ချက်ရလဒ်တွေအရ ရင်သားကင်ဆာကို လုံးဝအပျောက်ကုသနိုင်တော့မည်
စမ်းသပ်ချက်ရလဒ်တွေအရ ရင်သားကင်ဆာကို လုံးဝအပျောက်ကုသနိုင်တော့မည် ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာတွေထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေကို ဒုက္ခအပေးနိုင်ဆုံးနဲ့ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်နေရသူတွေများပါတယ်။ အခုဖော်ပြမယ့် သတင်းကောင်ကတော့ ကမ္ဘာကျော် Forbes မဂ္ဂဇင်ကနေ ထုတ်ပြတာဖြစ်ပြီး၊ ရင်သားကင်ဆာကို ပထမအဆင့်ကနေ လုံးဝမတက်စေတော့ဘဲ ရပ်တန့်စေမယ့် ဆေးနည်းကောင်းလို့ သိရပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို သူတို့အသစ်တီထွင်လိုက်တဲ့ဆေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ […]
တစ်ပတ်ကို အစပ်မုန့်ထုပ်(၄)ထုပ်စားလေ့ရှိတဲ့ မိန်းကလေး သည်းခြေအိတ်ပါ ထုတ်လိုက်ရ….
တစ်ပတ်ကို အစပ်မုန့်ထုပ်(၄)ထုပ်စားလေ့ရှိတဲ့ မိန်းကလေး သည်းခြေအိတ်ပါ ထုတ်လိုက်ရ…. တစ်ပတ်ကို အစပ်မုန့်ထုပ်(၄)ထုပ်စားလေ့ရှိတဲ့ မိန်းကလေး သည်းခြေအိတ်ပါ ထုတ်လိုက်ရ…. Rene လို့ခေါ်တဲ့ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာဆိုရင် မကြာသေးခင်ကမှ အပြင်းအထန်ဗိုက်အောင်လို့ ဆေးရုံတက်ပြီး သည်းခြေအိတ်တောင် ထုတ်လိုက်ရတယ်လို့ သူမရဲ့မိခင်ပြောကြားချက်အရ သိခဲ့ရပါတယ်။ ဆေးရုံရောက်တော့ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ […]